Ogaden News Agency (ONA) – Midawga Yurub oo Shirka Google Ku Ganaaxay $2.7 Bn.
Midawga Yurub oo Shirka Google Ku Ganaaxay $2.7 Bn.
Midowga Yurub (EU) ayaa ganaax lacageed oo gaadhaya 2.42 bilyan oo yuuro oo qiyaas ahaan u dhiganta ($2.7bn) ku soo rogay shirkada Google ka dib markii la ogaaday in shirkada ay si xun u isticmaashay awooddeeda.
Midawgu wuxuu sheegay in adeegyada dukaamaysiga ee Google lasiiyay caannimo aan dhexdhexaad ahayn marka ay timaado in aaladan wax laga dhexbaadho. Lacagtani ayaa ah ganaaxii ugu barnaa ee Midawga Yurub uu ku soo rogo shirkad lagu eedeeyay in ay wax isdaba marin ku samaysay suuqa caalamiga ah ee wax lagu kala iibsado.
Go’aankan ayaa sidoo kale ku amraya shirkada Google in ay ku soo afjarto muddo 90 maalmood gudahood ah ficilada ka dhanka ah tartanka haddii kale ganaaxyo dheeraad ah ay wajihi doonto mustaqbalka. Shirkada Google oo laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ay racfaan ka qaadan doonto xukunka golaha midowga Yurub uu kusoo rogay ee ganaaxa ay ku mutaysatay.